संरक्षणको पर्खाईमा तलुवागढी आइतवार, माघ ४, २०७७
ओखलढुंगाको आकाशमा आवाजविनाको बिजुली चम्केजस्तो अचम्मको प्रकाश मंगलवार, श्रावण २०, २०७७
कोरोना संक्रमितको क्वारेन्टाइनमै उपचार ! शनिवार, श्रावण १७, २०७७
ओखलढुंगाको सिंचाइ कार्यालयमा असुलिन्छ योजनैपिच्छे कमिसन ओखलढुंगा । १ नं. प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगामार्फत सञ्चालित चालु आर्थिक वर्षका निर्माणाधीन दर्जनबढी योजनामा कार्यालय प्रमुख यादवले एजेन्ट खटाएर कमिसन असुल्ने गरेको खुलेको छ । शुक्रवार, जेठ ९, २०७७
यस्तो पनि : कोरोनाको त्रासले कुन्तादेवीमा सडक थुनियो विश्वभरी महामारी फैलिएको कोरोनाले अनेकौ बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तै यहाँको मोलुङ गाउँपालिका १ मा भने सडक नै थुनिएको छ । कोरोनाको त्रासका कारण यहाँका स्थानीय युवाहरुले बरबोट-मान्द्रेदोभान सडकखण्डको जिरोप्वइन्टस्थित सडकमा बाँसको भाटाले बार लगाइदिएका छन् । मंगलवार, चैत्र १८, २०७६
चम्पादेवीको पोखरेमा चैतमा मूल फुट्यो ! आइतवार, चैत्र १६, २०७६
बाह! मुखमा दाँत ठेलेर शिविर उद्घाटन मंगलबारदेखि फेसबुकमा भाइरल भइरहेको याे तस्बिर हो ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार शिविर उद्घाटन कार्यक्रमको । उद्घाटनस्थल थियो चम्पादेवीकै घोराखोरी । गएको सोमबार शिविर उद्घाटनमा डाँकिएका थिए, प्रदेश १ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र प्रदेश १ कै अर्थ समिति सभापति एवं ओखलढुंगाका प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्का । शिविरमै थिए गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसी र अरु जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू । बुधवार, चैत्र ५, २०७६
सात पुस्ता अघिको हनुमानको मूर्ति वेवारिशे सोमवार, फाल्गुन १९, २०७६
यी युवकले बनाइदिए जन्मदिनमा असहाय महिलालाई घर शनिवार, फाल्गुन १७, २०७६
मेरो प्यारो ओखलढुंगा [फोटो फिचर] बिहिवार, फाल्गुन १५, २०७६
संरक्षणविहीन सुरूङ पुरिन थाले बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६
रूम्जाटार र राडीपाखी बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६
पानीले जोगाएको गाउँ पिउने पानी सधैं हाहाकार हुने सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नं. १ स्थित तलुवाको नाल्सु गाउँ विपन्नको गाउँका रुपमा परिचित थियो । सम्पन्न परिवारका व्यक्ति खानेपानी, विजुली र सडक पुगेका ठाउँमा बसाइ सरेर गए । गाउँ वस्ती साँघुरिदै गयो । पाखाबारी बाँझा हुन थाले । अहिले पनि त्यहाँ मगर समुदायका व्यक्ति दैनिक जीवनमा अनेक अभाव झेलेर गुजरा चलाइरहेका छन् । दशक यता एक दर्जन घरपरिवार सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसाइ सरिसकेका छन् । आइतवार, कार्तिक ३, २०७६